Umthandazo wentsikelelo yosuku. ? Fumana zonke iintlobo zeentsikelelo
Umthandazo wentsikelelo kufuneka ihlale isemlonyeni wethu kuba ngayo sinokumisa njengocingo olujikelezileyo apho izinto ezintle zinokuthi zingene khona.
Ilizwi LikaThixo lisicacisela ukuba iintsikelelo zikaThixo azongezi naluphi na usizi kwaye le nto iphambili ukuze sikwazi ukubona ukuba zeziphi iintsikelelo ezivela kuThixo kwaye zeziphi. Kule meko ngokwenza le mithandazo yeentsikelelo singabulela, sizisikelele okanye sincede omnye umntu kwaye siwabone amandla kaThixo ebomini bethu.
1 Umthandazo wentsikelelo
2 1) Umthandazo wokufumana zonke iintlobo zeentsikelelo
3 2) Umthandazo wentsikelelo wosuku
4 3) Imithandazo yeentsikelelo zikaThixo
5 4) Umthandazo wokubulela uThixo ngazo zonke iintsikelelo
5.1 Ngaba lo mthandazo wentsikelelo unamandla ngokwenene?
Iintsikelelo zizibonelelo esifunayo sonke okanye esifuna ukuzifumana ngalo lonke ixesha ebomini bethu.
Ngamaxesha amaninzi sibafumana bodwa kwaye ngaphandle kokuqonda kwaye emva koko kufuneka sibacele okanye sibalwele.Ngolu hlobo, umthandazo wentsikelelo uba sisixhobo esinamandla esinokusisebenzisa ngawo onke amaxesha.
1) Umthandazo wokufumana zonke iintlobo zeentsikelelo
Sikelela konke okuchukunyiswe zizandla zam namhlanje,
Ndisikelele umsebenzi wam kunye nokundinceda ukuwenza ngokuchanekileyo, ndingenzi iimpazamo.
Sikelela bonke abantu endisebenza nabo;
Bawo, zisikelele zonke zeengcinga novakalelo lwam,
ukuze ungacingi okanye uve kakubi,
ukuze konke okungaphakathi kwam luthando kuphela;
Sikelela onke amazwi am,
Ukungathethi ngezinto endinokuzisola ngazo kamva.
Usikelele umzuzwana ngamnye wobomi bam,
ukuze ngawo ndiwuthathe umfanekiso wakho kunye nelizwi kubo bonke abayifunayo.
Ndisikelele, NKOSI, NDIBE KUWE NGOKU NDIBONAKALAYO
ukuzisa izinto ezintle kubo bonke abantu
zijikeleze kum kwaye zonke zisikelelekile kuwe.
Ndicela ukuba wonke umntu osentliziyweni yam asikeleleke kuwe,
UMoya oyiNgcwele kunye neNtombi Enyulu;
Iintsikelelo eluthandweni, impilo, imali, intsapho, umsebenzi, ishishini, ilungu losapho, labantwana kunye nokushiya indlu yethu yonke imihla, iintsikelelo ziyafuneka kuzo zonke iindawo zobomi bethu.
Kubalulekile ukuba sazi indlela yokuseka usapho okanye imigaqo yobuqu yokwenza lo mthandazo yonke imihla okanye kanye ngeveki. Singayifundisa abantwana bethu kunye nosapho kwaye ngale ndlela yomeleze ukholo lwosapho kunye nokuchitha ixesha elinabo kunye nabo.
2) Umthandazo wentsikelelo wosuku
Usikelelekile uYise onamandla onke,
Ndiyabulela ngosapho ondinike lona,
Ngamana olu lonwabo lungayichukumisa intliziyo yam, kwaye kungumnikelo wendalo yonke ukwazi ukuba ndingumkhonzi wakho othembekileyo,
kwaye ngaloo ndlela ube sisixhobo soxolo lwakho lobuthixo.
Lo mthandazo wentsikelelo wosuku umangalisa nje.
La intsikelelo yemini yinto ekufuneka siyilwe mihla le. Ngokufanelekileyo, kwenze ekuseni ukuze usuku lonke lusikeleleke. Abanye abantu bahlala bekhanyisa ikhandlela elikhethekileyo ukwenza lo mthandazo, nangona kunjalo unokwenziwa nangaliphi na ixesha kunye nendawo.
Umzekelo womthandazo kaBawo wethu osibona esebhayibhileni usifundisa ukuba kufuneka sicele isonka sethu yonke imihla kwaye isonka sifuzisela zonke iintsikelelo esinokuzicelela okanye nezo esingazaziyo ukuba zifuna ntoni na kodwa yona iNkosi iyazazi.
3) Imithandazo yeentsikelelo zikaThixo
Ndiyabulela kuThixo ngokundinika intsikelelo yokuba nosuku olunye,
Enkosi kuba namhlanje ndiyabona kwakhona ukuba yindalo nothando kangakanani.
Namhlanje, ndingumntu owonwabileyo,
Ngethamsanqa kwaye ndinombulelo ukufumana ithuba elitsha lokuthatha usuku luzele luxolo,
Uthando, ukhuseleko kwaye okona kubaluleke kakhulu, sisikhokelo sakho.
Nkosi, ndiphe amandla wokoyisa wonke umqobo oza endleleni yam,
Ndomelele, ukhaliphe njengam,
Yenza uthando lwakho lugubungele bonke ubomi bam kunye nabo bonke abasondele kum nakwindlela yam.
Yonke imihla eqala ndithandazela ukuba undimamele kwaye uphendule ngesisa sakho esikhulu nobubele bakho.
Ndiyazi ukuba umphefumlo wam uyakudinga yonke imihla, kwaye undinika zonke iintsikelelo.
Ukwazi ukuphakamisa umthandazo wentsikelelo kaThixo kwaye ubonge igama likaThixo kwaye ucele ukuba asisikelele kufuneka abe lelinye lamanyathelo esiwathatha kwimithandazo yethu yokuzinikela.
Iintsikelelo zikaThixo zifunyanwa kuqala kwindawo yokomoya kwaye nasemzimbeni Le yeyona ndlela esinokuthi silwele ngayo oko sifuna ukukufumana kwaye kuphela ngokomoya.
4) Umthandazo wokubulela uThixo ngazo zonke iintsikelelo
Umbulelo lixabiso lokuba kunye nexhala lomdiliya kubonakala ngathi ulahlekile kodwa inkosi elungileyo kwilizwi lakhe isixelela ukuba masibe nombulelo.
Kukho ibali lomnye wemimangaliso kaYesu xa waphilisa abantu abalishumi ababeneqhenqa kwaye omnye kuphela ebuyile, abanye bahamba nje bayonwabela ubomi ngomzimba ophile qete, oku kusifundisa ukuba singabinambulelo kuphela abalishumi abaza kubuya, abanokuthi kuthi, bahlala bahlala bekhumbula umbulelo kuThixo ngeentsikelelo esizifumana kuye.
Ukuvula nje amehlo ethu kumhla omtsha, ukuphefumla nokuba nosapho lwethu, zizinto ezincinci ukuba singalibali ukubulela kuThixo. Masifunde ukuba nombulelo kwaye siphakamise umthandazo wombulelo mihla le ngazo zonke iintsikelelo esizifumeneyo
Ngaba lo mthandazo wentsikelelo unamandla ngokwenene?
Umthandazo onamandla yinto eyenziwayo ngokholo kuba kuphela kommiselo olungiselelwe oko imithandazo yethu Yivani.
Ukuba sibuze ngokungathandabuzi okanye ngokuzingca, singakholelwa ukuba iNkosi inokusinika le nto siyicelayo, ngumthandazo ongenaxabiso ongazukuyifeza injongo yawo. Ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukukholisa uThixo, imfundiso ezukileyo esebhayibhile ekufuneka sihlale siyikhumbula.
Uhlala unokholo oluninzi ngelixa uthandaza umthandazo wosikelela umhla kuThixo kwaye ufumane zonke iintlobo zeentsikelelo.
Umthandazo onamandla wegazi likaKristu